Tatova pakati pedu ROSA Linux Marathon 2012 Yekupedzisira | Kubva kuLinux
Isu tatova neROSA Linux Marathon 2012 Yekupedzisira pakati pedu
Kubva nezuro, zvinoita sekunge chiziviso chepamutemo (muchiRussia) kwavakataura kuwanikwa kweshanduro yekupedzisira yekuparadzira kukuru uku, heino chikamu chemashoko akati:
ROSA kambani inofara kuzivisa kuti yapedza basa paROSA Marathon 2012 inoshanda system (kugoverwa kweLinux nerutsigiro rwakawedzerwa kusvika pamakore mashanu, yakanyanya kutarisana nevatengi vebhizinesi).
Zvakanaka, izvi zvinoreva kuti chinangwa chikuru cheiyi distro kudzikama uye kugadzirwa, chingave chimwe chinhu senge rudzi rweDebian Stable, asi kune avo vanofarira vanofarira adrenaline uye vanotambura neshanduroitis (seni XD), Rosa ane kushamisika kunofadza:
Nekuvhurwa kweROSA Marathon 2012, tarisiro huru yekambani inozoenda kugadziriro yenzvimbo nyowani yekushandisa ROSA Desktop 2012, iyo yakarongerwa kuburitswa mukupera kwegore. Inofananidzwa neMarathon, iyo Desktop vhezheni inotarisa zvakanyanya kune vashandisi ve desktop, kutsvaga kwekucheka-kumucheto maficha, akasiyana siyana ehurongwa hwekugadzirisa mikana, uye akasiyana siyana ekushandisa.
Kana paine chero munhu anoda kuziva zvakawanda nezve kugovera uku anogona kuverenga izvi chinyorwa. RosaLinux, ine mbiri shanduro, iyo FREE inosanganisira chete Mahara Software uye iyo EE inosanganisira proprietary software (Kunze kweBhokisi).
mabviro: RosaLabs Yepamutemo Blog
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Isu tatova neROSA Linux Marathon 2012 Yekupedzisira pakati pedu
Shamwari Perseus, iwe unova muyedzo weese ma distros anoburitswa, pamwe iwe watove neRosa yakaiswa, saka isu takamirira nyanzvi yako yekutaura.
Chokwadi, ini ndinovimbisa kuongorora iyi huru distro munguva pfupi- uye nekutenda nerumbidzo XDDD
Mhoroi, ini ndangoisa kugovera uye manzwiro acho akanaka kwazvo. Asi ndine kusahadzika ... ini ndaisa madhiraivhi e nvidia kubva kumaneja wepakeji, ini ndakadzorerazve sisitimu uye kana ndichitanga zvido zve nvidia inoti ini ndinofanira kutanga rairo "nvidia-xconfig" mumidzi. Ini ndinotanga iwo wekuraira uye pandinotangazve iri mune mameseji modhi. Mumwe munhu aigona kundibatsira?. Ndinokutendai zvikuru pamberi, kukwazisa.
Zvingangodaro, iwe warasikirwa kuisa imwe yekuwedzera kutsamira, asi isu tinopinda nematanho, kana iwe uchinge watanga yako sosi uye wopinda mukati mameseji modhi, mhando:
Semunhu akajairika mushandisi, kana iwe ukawana yekukanganisa meseji, unamate, kana iwe ukatanga graphical nharaunda inoyambira uye isu tichaona maitiro ekugadzirisa ese ari maviri kesi;).
Ini ndakakanganwa, unogona kushandisa yedu foramu kufumura kusahadzika kwako, matambudziko nezvimwe ...
Inobata kutarisisa kwangu, asi ndinofunga kuti haishande chaizvo pa netbook rangu
Ndatenda zvikuru nekupindura. Zvakanaka, ini ndakaedzawo kutanga ne startx uye gakava rinoramba richioneka, zvinondiudza kuti uwane rumwe ruzivo bvunza /var/log/Xorg.0.log uye kutsvaga ini ndinoona kunetsana kunotevera: [11655.878] (EE) Yakundikana kutanga kuwedzera kweXXX ( Inoenderana NVIDIA X mutyairi haina kuwanikwa). Ndatenda
- dzosera mutyairi
- bvisa xorg.conf kana kuichengeta uye gadzira imwe nyowani
Hongu, zvinoratidza kuti mutyairi haana kuiswa nemazvo. Kugadzira faira nyowani reXorg:
teedzera kana fambisa iyo nyowani faira xorg.conf.new kuenda / etc / X11:
neizvi iwe uchave unokwanisa kuwana iyo graphical nharaunda zvakare, gare gare iwe unogona kuisa iyo nvidia mutyairi zvakare, rombo rakanaka;).
Hapana, hapana nzira yekumhanyisa muridzi weNvidia mutyairi. Ini ndatove ndatokwanisa kuve mune generic mode. Ndichidzoka kudzoreredza madhiraivha, ini ndinoona kuti vakawedzera kuverenga kuverenga vachitaura kuti iwe unofanirwa kuiratidza neiyo XFdrake application, ini ndinoteedzera nhanho dzavo uye inogara ichimaka Intel 810 uye gare gare, ini ndinoedza kushandura mutyairi kuenda kuGeForce 400 nhevedzano uye latery zvinoita kwandiri kunge iko kukanganisa « (EE) Hapana zvishandiso zvakawanikwa. '. Ini ndinoona kuti iyo GF108 (GeForce GT 540M) uye 2nd Generation Core processor Mhuri Yakabatanidzwa Graphics Controller inoona makadhi mune maneja wehardware. Chokwadi ndechekuti handichaziva zvekuita ... Maita basa
Mhoro mukoma, ini ndinokurudzira kwazvo kuti uburitse dambudziko rako muforamu yedu, nekuti kazhinji inzvimbo yakanaka yekuita izvi, ipapo tine vanhu vazhinji vanogona kukupa tambo kuti uigadzirise (kukumbira mumwe wedu @Annubis mukuru wechikwata che mandriva XD) :).
Cherechedza: Parizvino foramu yedu ine matambudziko: (, tinovimba dambudziko iri harigare kwenguva refu;).
Kutenda uye ndine urombo, pachokwadi ndanga ndichizotumira ipapo, asi sekuona kwandakaita kuti yaive pasi ini handina kuzviita. 🙂
Angori maminetsi mashoma apfuura foramu iri online 😀
Yakanaka kwazvo distro, neKlook neKDE yakazara, nekutenda nenhau
Ini ndoda kuve nemazororo ekugovera uku sezvo ini ndisingakwanise kuwana amsn, kmess uye nezvimwe zvakadaro, uye izvo zvinouya nekutadza zvinowana zvishoma pasuru
Nhau dzeMandriva. Ndakaverenga munhau Drake kuti Mandriva anotiunzira nhau nyowani nezve ramangwana ravo.
Gustavo Castro akadaro
Zvinoshamisa. Kutendeseka, ndinonzwa kuti yaive ROSA yakandiita kuti ndide Mandriva 2011, zvakashata uyu haachisiri wenguva (inogadziridza). Pamwe iri zano rangu chete, asi ini ndinofunga Mandriva anogona kudzokera kumazuva ekubwinya, kana vakanyatsoteerera kushanduro dzeapp.
Pindura Gustavo Castro
Wataura chokwadi nezve maapplication emaapplication, isu tichafanirwa kumirira Rosa Desktop 2012, asi iyi distro iri, mumaonero angu ekuzvininipisa, akanakisa ekugadzirwa uye enzvimbo dzebhizinesi.
Mhoro perso mubvunzo uyu unobva pane chii distro, ndinofunga inotaura kuti mudhiian ini handizive ????
Pindura kuna jonathan
Iyo yakavakirwa paMandriva 2011 😉
marco matthew akadaro
batsira. Ini ndichangobva kuisa rose 2012, asi ndine dambudziko neisina waya controller, handigone kuti iite, netambo kana iwe ukaidhonza, ndapota ndibatsire.
hp pavilion dv2000 laptop,
Pindura kumarco mateo
Makorokoto pane yako blog. Ndinoda kuziva kana zvichikwanisika kuisa Rosa pamwechete neUbuntu neWindows 7. Kwaziso
Rene Lopez akadaro
Ehe, zvinogoneka, uye yakapusa kwazvo kuvonga kuna Rosa's installer.
Kunyangwe panguva ino iwe watoisa kare kare .. XDD
Pindura Rene Lopez
Xfce 4.10 ikozvino inogona kuiswa paXubuntu kubva kune yepamutemo PPA
Kuziva iyo CLI: Kubva wma kune mp3 mune maviri nhanho